High-Value ကိုတိုက်ရိုက်အားကစားများအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမီဒီယာကွန်ယက်အသုံးပြုခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများ - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက် - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့်
Home » အသားပေး » High-Value ကိုတိုက်ရိုက်အားကစားများအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမီဒီယာကွန်ယက်အသုံးပြုခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများ
ပြက္ခဒိန်ထဲမှာအဓိကအားကစားဖြစ်ရပ်များအမြဲကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများပါပြီနေစဉ်, ပို. ပို. အခွင့်အရေးများကိုင်ဆောင်သူအဆိုပါအားကစားအစုစု၌ရှိသမျှသောအဆင့်ဆင့်မှာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝယ်လိုအားရှာတွေ့နေကြပါတယ်။ လိခ်နှင့်အဖွဲ့အစည်းများတလက်ပေါ်နိုင်ငံရပ်ခြားပရိသတ်များနှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူချိတ်ဆက်ဝေး၎င်းတို့၏ဒေသဆိုင်ရာနယ်မြေကျော်လွန်ပြီးပရိသတ်တွေတည်ဆောက်နိုင်ကြသည်နှင့်အခြားအပေါ်ပရိသတ်သစ်များတည်ဆောက်ခြင်း။ အာရှတလွှားကနိုင်ငံတကာဘောလုံးရှပ်အင်္ကျီ၏နေရာတိုင်းတွင်တွေ့နေကြားနေရမှအအမေရိကန်နိုင်ငံအတွက် subcontinental ပရိသတ်တွေအကြားပုရစ်များ၏ကြီးမားလူကြိုက်များဖို့, အားကစားအဓိကပြိုင်ပွဲနှင့်ဂိမ်းများ၏သံသရာကျော်လွန်ပြီးလမ်းရောက်ရှိမယ့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပါတယ်။
အကြောင်းအရာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစျေးကွက်၏ 20% များအတွက်အမေရိကန်နိုင်ငံတစ်ဦးတည်းအကောင့်များမှပေးပို့နှင့် Telstra အာရှပေးသည်နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပရိသတ်တွေမှအားကစားနှင့်ဖျော်ဖြေရေးအကြောင်းအရာကယ်တင်သောဆက်သွယ်မှု။ အဆိုပါ Telstra ဂလိုဘယ်မီဒီယာကွန်ယက် (GMN), အတူတကွကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဖက်များ၏ကွန်ရက်များနှင့်တကွ, USA တွင်ရှိနေခြင်း၏ 300 ကျော်အချက်များရောက်ရှိဖို့။ ဒီအမြင့်မားတဲ့တန်ဖိုးတိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုကိုအကြောင်းအရာဝန်ဆောင်မှုဆက်လက်နှင့်ဆက်သွယ်မှုလိုအပ်ချက်များကို၏အရည်အသွေးတွေ့ဆုံ, high-bandwidth နှင့်စိတ်ချစွာသုံးစွဲနိုင်ပေးထားပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရှစ်ပစိဖိတ်ဖြတ်ကျော် cable ကိုလမ်းကြောင်းအာရှပစိဖိတ်ဒေသအနှံ့ key ကိုနိုင်ငံတကာစျေးကွက်နှင့်အတူအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုချိတ်ဆက်နှင့်တိုင်းပြည်ထဲက cable ကိုစွမ်းရည်၏ 20TB ကယ်နှုတ်တော်မူ။
အမေရိကန်ဈေးကွက်နှင့်အာရှရှိငါတို့အစွမ်းသတ္တိသော်လည်းပုံကသာတစိတ်တပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ Telstra တကမ္ဘာလုံး 250,000 နိုင်ငံများနှင့်နယ်မြေများကိုကျော်ထဲမှာရှိနေခြင်းထက်ပို 2,000 အချက်များမှဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်အတူ, 200 မိုင်ကျော် spanning တစ်ခုကျယ်ပြန့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကွန်ယက်ကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ ငါတို့သည်လည်းအာရှပစိဖိတ်ဒေသအတွက်အကြီးဆုံးဘက်ပေါင်းစုံဒေတာစင်တာကိုခြေရာတစျခုနှင့်အတူကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း 58 ဒေတာစင်တာများမှဆက်သွယ်မှုကိုဆက်ကပ်။ အဆိုပါ Telstra GMN Partner မဟာမိတ်အဖွဲ့ 2,500 အားကစားနှင့်မီဒီယာဖောက်သည် 1,000 က high-profile ကိုအားကစားကွင်းများနှင့် 1,500 ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတယ်လီပို့အပါအဝင်ထက်ပို 10 အဆုံးမှတ်, တစ်ခုထပ်တိုး access ကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဤသည်ကိုဦးဆောင်အားကစားအမှတ်တံဆိပ်နှင့်ကုမ္ပဏီများအဘို့, အရှိဆုံးအတိအကျလိုအပ်ချက်များမီဒီယာကွန်ယက်ကိုဖြေရှင်းချက်ဒီဇိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကမ္ဘာလုံးဖြတ်ပြီး WTA Tour ရဲ့ 47-ပေါင်းနေရာများမှဗီဒီယိုပို့ဆောင်နိုင်စွမ်းထူးခြားတဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကွန်ယက်ကိုဒီဇိုင်း WTA မီဒီယာနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပါပြီ။ ဤသည် built-in အတူ redundancy, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဗီဒီယို၏အတင်းကြပ်လိုအပ်ချက်များကိုအဘို့ဒီဇိုင်းထုတ် "dual-နှင့်ကွဲပြားခြားနား" ဖိုင်ဘာဆက်သွယ်မှုလည်းပါဝင်သည်နှင့်အပေါ်တွင်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုနှင့်ခံနိုင်ရည်များအတွက် WTA မီဒီယာအချက်အချာနှစ်ခုပထဝီအနေအထားအရမတူကွဲပြားလမ်းကြောင်း။ အောင်မြင်မှုရဲ့သော့ချက် WTA မီဒီယာအပြိုင်အတွက်မျိုးစုံဖြစ်ရပ်များကိုဖုံးလွှမ်းရန်ခွင့်ပြုသောမှုအဆင့်ဖိုင်ဘာရဲ့စွမ်းရည်ဖြစ်ပါသည်, 700 ကနေအကြောင်းအရာတစ်ခုတိုးချဲ့ဖို့ဦးဆောင်ကျော် 2,500 မှတစ်နှစ်တစ်ခုတည်းရာသီအတွက်ကိုက်ညီလိုက်ဖက်။
ကျနော်တို့အားကစားအကျင့်ကိုကျင့်ထုတ်လွှင့်ပုံကိုငါသိ၏။ တကမ္ဘာလုံး, Globecam သုံးပြီးအဓိကဖြစ်ရပ်များမှာထူးခြားတဲ့ကင်မရာထောင့်ကနေ content တွေကိုကယ်လွှတ်ခြင်းငှါပိုကောင်းနည်းလမ်းတွေဆောင်ခဲ့ မှစ. ကျော်လွန်အာရှကြှနျတျောတို့၏အနုပညာ Telstra အသံလွှင့်လုပ်ငန်းစင်တာပြည်နယ်, သို့မဟုတ် streaming များအကြောင်းအရာကနေတိုက်ရိုက်လွှဖြစ်ရပ်များစောင့်ကြည့်ဖို့, အားကစား၌အကြှနျုပျတို့၏ကျွမ်းကျင်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်တွေနဲ့ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဖွ သြစတြေးလျနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း။
မဟုတ်မှသာ Telstra ကွန်ယက်၏အတိုင်းအတာထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ပရိတ်သတ်များအတွက်မြင့်မားသောအရည်အသွေး, Low-အောင်းနေချိန်ဗီဒီယိုကိုဖြန့်ဝေသေချာပါဘူး, ဒါကြောင့်လည်းမှာ-အိမ်မှာထုတ်လုပ်မှုဆီသို့မဏ္ဍိုင်အတွက်သော့ချက်ပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Fox ကအားကစားသြစတြေးလျနှင့်အတူပူးပေါင်းနှင့် NEP သြစတြေးလျကနေ NEP Andrews ကဆစ်ဒနီရှိ hubs နှင့်မဲလ်ဘုန်းမြို့ကနေပထမဦးဆုံးအောင်မြင်သောပစိဖိတ်ဖြတ်ကျော်ဝေးလံခေါင်ဖျားမှ Tier တစ်ခုမှာအားကစားအကြောင်းအရာ၏ဝေးလံခေါင်သီထုတ်လုပ်မှုများအတွက်သြစတြေးလျ-ကျယ်ပြန့် Distributed ထုတ်လုပ်မှုကွန်ယက် (DPN) ထွက်လှိမ့်ရန် ဆစ်ဒနီနှင့်အကြား 2018 အတွက်ထုတ်လုပ်မှု Los Angeles မြို့ဤအသစ်ကပုံမှန်ဖြစ်လာသည်။ အများစုမှာမကြာသေးမီက, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ DPN 30 ကိုအပ် HD တိုက်ရိုက်လွှကင်မရာနှင့်ဂရပ်ဖစ်ဆစ်ဒနီအတွက် NEP Andrews ကထုတ်လုပ်မှုအချက်အချာရန်ဂျပန်, တိုကျိုကနေတဆင့်ယိုကိုဟားမားအတွက် Nissan ကားအားကစားကွင်းကနေ 8,000 ကီလိုမီတာအတွင်းဇွန်လကမ္ဘာ့ဖလား Relay ချန်ပီယံရှစ်ကနေ feeds ။
အဆိုပါ Telstra ကွန်ယက်၏ပါဝါနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်မြှနိုင်စွမ်းလည်းအားကစားထုတ်လွှင့်မှုအတွက်အကျိုးစီးပွား၏အခြားဒေသများအတွက်တီထွင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Globecam သေးသေးလေးကင်မရာပစ္စည်းများဥပမာ, အားကစားဖြစ်ရပ်များ၏မြင့်-ကထုတ်တဲ့အရေးယူဖမ်းဆီးဖို့နှင့်အလွန်အမင်းစွဲငြိဖွယ်ရာမြင်ကွင်းအတွေ့အကြုံကိုပေး built နေကြသည်။ အဆိုပါပစ္စည်းများပေါ့ပါးကျစ်လစ်သိပ်သည်းဖြစ်ကြပြီးညာဘက်ကိုလယ်-of ကစားသို့မဟုတ်တရားရုံး, အားကစားပေါ် မူတည်. တစ်ဦး RefCam, NetCam, UmpireCam, ဒါမှမဟုတ် HelmetCam အဖြစ်အသုံးချရှိမရှိကနေတိုက်ရိုက်လွှအကြောင်းအရာခံယူခြင်းနှင့်ထုတ်လွှင့်ဖို့ဆန်းသစ်နိမ့်အောင်းနေချိန်ဒစ်ဂျစ်တယ် link ကိုနည်းပညာကိုအသုံးပြုပါ။ Globecam တစ်စီမံခန့်ခွဲဝန်ဆောင်မှုအဖြစ်ပေးအပ်သည်နှင့်အားကစား codes တွေကို, အဖြစ်အပျက်စီစဉ်များနှင့်ထုတ်လွှင့်များ၏တစ်ဦးချင်းလိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီရန်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်တဲ့နိုင်ပါသည်။
of Service ကိုအာမခံချက်အရည်အသွေး
ရေရှည်သို့မဟုတ်ရံဖန်ရံခါအသုံးပြုမှုအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဖက်တွေနဲ့ပေါင်းစပ်အတွက် Telstra ဂလိုဘယ်မီဒီယာကွန်ယက်၏အရွယ်အစားနှင့်စကေးကျနော်တို့ဝန်ဆောင်မှုဘယ်မှာအခါလိုအပ်တစ်ခုစိတ်ချစွာအရည်အသွေးကိုနှင့်သင်၏အကြောင်းအရာကယ်နှုတ်တော်မူရန်စွမ်းရည်ရှိကိုဆိုလိုသည်။ ကျနော်တို့နှင့်အာရှထဲကအတွေ့အကြုံကိုပို့ဆောင်အကြောင်းအရာအနှစ်ရှိသည် - အမှန်ပင်ကျနော်တို့ဒေသရဲ့အင်တာနက်အသွားအလာ% 30 အထိတင်ဆောင်, အာရှပစိဖိတ်ဒေသအတွက်အကြီးဆုံး subsea cable ကိုကွန်ယက်ကိုရှိသည်နှင့်အရှိဆုံးအချင်းချင်းအပြန်အလှန်အာရှ lit စွမ်းရည်မှဝင်ရောက်ခွင့်ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ - နှင့်အခြားနေရာများတွင်ကမ္ဘာတဝှမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဖက်ကျွန်တော်တစ်ဦးအမှန်တကယ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖြေရှင်းချက်များကိုအာမခံပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ network ရဲ့စွမ်းရည်ဟာခိုင်မာတဲ့ဆက်သွယ်မှုများနှင့်အနိမ့်အောင်းနေချိန်ဆက်သွယ်မှုမှာ-အိမ်မှာထုတ်လုပ်မှုတောင်းဆိုချက်များကိုပေးစဉ်အခါ, အားကစားစျေးကွက်ကနေက Ultra High Definition content များအတွက်မြင့်တက်ဝယ်လိုအားမှဖြည့်တင်းရန်ပြီးပြည့်စုံသောဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်။ အာရှ, အမေရိကန်နိုင်ငံနှင့်ဥရောပ၌အကြှနျုပျတို့၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအသံလွှင့်လုပ်ငန်းစင်တာနှင့်အပိုဆောင်းမာစတာထိန်းချုပ်ရေးအခန်းများအားလုံးအကြောင်းအရာနာရီဝန်းကျင်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲကြောင်းသေချာစဉ်ကတိုက်ရိုက်အဓိကထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ကမ္ဘာတဝှမ်းအဓိကနေရာများသို့ဆက်သွယ်မှုများကိုခွင့်ပြုပါတယ်။
အားကစားကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစိတ်အားထက်သန်သည်။ ကြီးထွားလာပရိသတ်တွေရောက်ရှိရန်နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းပရိတ်သတ်တွေများအတွက်တိုက်ရိုက်တွင်ပါဝင်သောအကြောင်းအရာများကိုတိုးမြှင့်ဝယ်လိုအားတွေ့ဆုံရန်အဘယ်လိုအပ်သော Telstra ဂလိုဘယ်မီဒီယာကွန်ယက်ကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းလက်လှမ်းမမီ, bandwidth ကိုနှင့်တည်ငြိမ်မှုရှိကြောင်းဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Author: အန်နာ Lockwood, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအရောင်းဌာနမှူး, Telstra အသံလွှင့်န်ဆောင်မှုများ - IBC ရပ်အရေအတွက်က (ရှိလျှင်): ခန်းမ 14.F18
IBC 2019: ရှေ့ဆောင် Visual ဇာတ်လမ်းတွေကိုအမှတ်တံဆိပ် Vizrt, NewTek နှင့် NDI စည်းလုံးစေ - စက်တင်ဘာလ 3, 2019
High-Value ကိုတိုက်ရိုက်အားကစားများအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမီဒီယာကွန်ယက်အသုံးပြုခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများ - သြဂုတ်လ 19, 2019
Zixi: လုံလုံခြုံခြုံ IP ကိုကျော်တိုက်ရိုက်, ထုတ်လွှင့်အရည်အသွေးဗီဒီယိုပျ - သြဂုတ်လ 6, 2019
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော လှံ & Arrows စာတန်းထိုး, ဒစ်ဂျစ်တယ် Nirvana, မီဒီယာစောင့်ကြည့်ရေး, IBC ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2019-08-19
ယခင်: Blackmagic ဒီဇိုင်းတိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအသွားအလာ Capture ပွဲတော် Beauregard
နောက်တစ်ခု: "Veronica အင်္ဂါဂြိုဟ်" (4 ပုဒ်မ 2) ၏ရာသီ2အတွင်းပိုင်း
2019 NAB Show ကိုနယူးယောက်ကိုယ်ရေးဖိုင်: Jem Schofield
IBC 2019 မှာဆော့ဝဲ-သတ်မှတ်ထားသော Visual ဇာတ်လမ်းတွေ၏ NewTek Usher ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်
ဒန် Rayburn: Show ကိုနယူးယောက်ကိုယ်ရေးဖိုင် NAB
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်ပွဲတော်မှာ Blackmagic ဒီဇိုင်းကုန်ပစ္စည်းများအသုံးပြုဆာလောင်မွတ်သိပ်ကမ္ဘာမြေ Productions